कस्तो अचम्म ! आमा माथि सौता गएर आफ्नै बाबुको बच्चा जन्माउन चाहन्छिन यी युवती « रंग खबर
जब जन्म दिने बाबुले नै छोरी माथि प्रेम गरेर सम्भोगको इच्छा गर्छ भने तब बाबु छोरीको नाता के त ? तपाइलाई बिस्वाश नलाग्ला तर अमेरिकामा यस्तो घटना घटेको छ | कुनैपनि बावुका लागि उसकी छोरी दुनियाकै सबैभन्दा सुन्दर, श्रेष्ठ तथा पवित्र लाग्छिन् । तर अमेरिकामा एकजना बुवा र उनकी छोरीले भने यो मान्यतालाई तोडिदिएका छन् । त्यहाँ बुवा छोरीमा माया त छ, तर त्यो मायाको परिभाषा निकै फरक छ ।
उनीहरुबीचमा बाबुछोरीबीचको होइन, लोग्नेस्वास्नीबीच हुने प्रेम बसेको छ । ती दुइबीच पहिले प्रेम भयो, त्यसपछि सम्बन्ध गाँसियो र दुबैले बिहे गर्ने फैसला गरे । छोरीचाहीँले आफ्नै आमाकी सौता बन्ने निधो गरिन् । बाबुछोरीको पवित्र नातालाई लाजमर्दो बनाउने यो जोडीले अहिले भने परिवार बसाउने फैसला गरिसकेको छ ।
ज्ब ती युवती आफ्नै बाबुसँग प्रेममा परिन् उनी १७ वर्षकी थिइन् । उनीहरुले कैयौँ हप्तासम्म एक अर्कालाई च्याट गरे । पहिलोपटक आफ्नो बाबुलाई देख्नु निकै अनौठो तथा द्धिविधाग्रस्त कुरा भएपनि उनी निकै सुन्दर देखिएको युवती बताउँछिन् ।
त्यसपछि उनले बाबुलाई उनी आफ्नो पहिलो प्रेमी भएको बताइन् । अन्ततः उनीहरुबीच इन्गेजमेन्ट भयो र उनीहरु बच्चा जन्माउने योजना बनाइरहेका छन् । ती बाबुछोरीकेा नाम भने खुलाइएको छैन ।